VMware သည် Linux Foundation အဖြစ် Gold အသင်းဝင်သူဖြစ်သည် Linux မှ
Luigys toro | | GNU / Linux များ, NOTICIAS
ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းကြားရန်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည် VMware က ဆက်သွယ်ပါ Linux Foundation como Gold Memberယခုထည့်သွင်းမှုအသစ်သည်၎င်းအားထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Linux Kernel ကိုဆက်လက်တိုးတက်စေရန်နှင့်အထူးသဖြင့် virtualization နယ်ပယ်တွင်ဗဟုသုတများစွာကိုဖလှယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သူကကြေညာခဲ့သည် ဂျင်မ် Zemlin စာသားအရပြောကြားခဲ့သည့် Linux Foundation ၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာVMware က အရင်းအမြစ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များပေါကြွယ်ဝမှုမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။ ပူးပေါင်းမှုဝေမျှခြင်းသည်ဒေတာစင်တာများမှသတင်းအချက်အလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုကျော်လွှားရန်နှင့် ကျော်လွန်၍ နည်းပညာအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည် "
VMware က ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ကိုဆက်ပြီးဆက်ပြီးလောင်းနေတယ်၊ ​​ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကုမ္ပဏီ၏ရာထူးများထပ်တိုးခဲ့သည် Dirk Hohndel၊ ကုမ္ပဏီကို Linux နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းကိုပိုမိုတက်ကြွစွာ ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်။
ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အရေးပါမှုကိုအနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာနိုင်ရန် VMware သည်ယနေ့နှင့်၎င်း၏အရေးပါမှုကိုအခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းရန်အရေးကြီးသည်။
«VMware က Inc က, EMC ကော်ပိုရေးရှင်း (Dell Inc မှပိုင်ဆိုင်သည်) သည်ထောက်ပံ့သောကုမ္ပဏီ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည် Virtualization software X86 သဟဇာတကွန်ပျူတာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်ပါဝင်သည် VMware Workstationနှင့်အခမဲ့သူတွေကို VMware ဆာဗာ y VMware Player ကို။ VMware ဆော့ဖ်ဝဲကို Linux၊ Windows နှင့် Intel ပရိုဆက်ဆာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော macOS ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အမည်အောက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည် VMware ပေါင်းစပ်ခြင်း။။ ကုမ္ပဏီ၏ကုမ္ပဏီအမည်မှာအတိုကောက်၏ရိုးရာအဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးပြီးစကားလုံးများဖြင့်ကစားသည်။VM» virtual machine များကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာပတ်ဝန်းကျင်တွင် (Vအစစ်အမှန် MAchines) ။»
VMware ၏စီးပွားရေးလောကတွင်အတော်အတန်များပြားသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအဖွဲ့အစည်းသည်၎င်းကို open source အဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဖန်ဆင်းတာပေါ့ တိမ်တိုက် Foundry ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှု (PaaS) ကဲ့သို့သောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပလက်ဖောင်းသည်ဤပလက်ဖောင်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည် Foundation ၏အခြေခံနည်းပညာဖြစ်လာသည် ခေတ်သစ်အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံ။
VMware သည်လက်ရှိတွင် open source ကိုအခြေခံသည့်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးပုံစံများအကြားအဆက်မပြတ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်မျိုးစုံဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည့် open source စီမံကိန်းများအတွက်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းပါ ၀ င်သည်။
VMware မှ open source သို့ဤကတိက ၀ တ်သည်နည်းလမ်းသစ်များဖန်တီးရာ၌စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဖလှယ်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » VMware သည် Linux Foundation သို့ Gold အသင်းဝင်သည်
နောက်ဆုံးတော့! ကောင်းပြီငါပဲမင်းကိုချီးကျူးရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုယူ! ဘလော့ဂ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ၎င်းသည်ရွှေအမျိုးအစားအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ထမြောက်ခဲ့သည်။
VMWare သည် GPL ကိုမလေးစားပါ https://en.wikipedia.org/wiki/VMware#Litigation
အကယ်၍ VMware သည်ဘက်ထရီများ - ဘက်ထရီများကိုမထည့်ပါက၎င်းသည် virtual စက်များနှင့်ဆာဗာများ၌ကျန်ရှိနေသည်၊ KVM နှင့် libvirt ပေါ်ထွက်လာသည်အထိကျွန်ုပ်နေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည်။ Red Hat သည် KVM + oVirt နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည် "Cloud" နှင့်ပတ်သက်လျှင်စဉ်းစားရန်အလွန်လေးနက်သောပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ OVA (https://blog.desdelinux.net/virtualizacion-debian-introduccion-redes-computadoras-las-pymes/"Open Virtualization Alliance" သည်၎င်း၏အင်္ဂလိပ်စာခေါင်းစဉ်ကိုလေးစားသည် Linux Foundation ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဤ Consortium သည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ - KVM ပါ ၀ င်သော virtualization ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အရင်းအမြစ်နှင့် oVirt ကဲ့သို့သော၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်သောဆော့ဝဲများကိုအသုံးပြုရန်ကတိပြုသည်။
OVA ၏လုပ်ငန်းသည်အလွန်လေးနက်ပြီး VMware ကိုဖယ်ရှားပစ်သည်မှာသေချာသည်။ ကြီးမားသော "တိမ်များ" အတွက်ဖြေရှင်းချက်များစွာကို OpenSTACK နှင့် Ubuntu ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ VMware သည်စခန်းတွင်းသို့အလျင်မြန်ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲဘက်တွင်ရှိနေသည်ဟုသူထင်မြင်သည့်စခန်းသို့ဝင်ခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံ!